, विज्ञान जिज्ञासा
मन्दिरमा घण्टी किन बजाइन्छ ? यसभित्र लुकेको वैज्ञानिक पक्ष
मन्दिरमा घण्टी किन बजाइन्छ ? यसभित्र लुकेको वैज्ञानिक पक्ष ! हिन्दु धर्म संस्कृतिका धेरै विषयवस्तुमा वैज्ञानिक पक्ष लुकेको रहेको हुन्छ । खानेकुराको वैज्ञानिकतादेखि लिएर मनुष्यले जीवनमा अपनाउने स-साना नियमका कुरा हुन् । मानिसको जीवनमा यस्ता स-साना कुराले धेरै सार्थकता राख्ने गर्दछ । त्यस्तै हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले मन्दिरमा वा घरमा पुजा गर्दा घण्टी बजाएर आराधना वा पुजागर्ने […]
यस्ता छन् दाह्रीजुँगा पाल्नुका बैज्ञानिक फाइदाहरु
हाम्रा पुर्खा र ऋषिमुनिले त्यसै दाह्री पालेका होइन रहेछ । दाह्रीजुँगा बढेको छ र काट्न लाग्नु भएको छ भने एक पटक सोच्नुहोस् । हाई पर्सनालिटीका लागि पनि दाह्रीजुँगा फालेर चिटिक्क पर्नुपर्ने धेरैको बुझाइ छ। दाह्रीजुँगा नखौरिनुलाई अल्छीपनको संज्ञा पनि दिने गरिन्छ । तर, दाह्री पाल्दाका केही महत्त्वपूर्ण फाइदा छन्, जे दाह्री काट्नेले गुमाई रहेका छन् । दाह्रीजुँगा पाल्ने पुरुषलाई प्रोत्साहन […]
हिन्दु समाजमा महिलाले हातमा काँचका चुरा लगाउने चलन पहिलादेखि चली आएको छ । यसलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् । तर, यससँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ । हिन्दू धर्म अनुसार साउनमा हरियो चुरा लगाएमा मनले चाहेको पूरा हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । साउनमा हरियो चुरा लगाउँदा आफ्नो घरमा राम्रो […]
सिन्दुर लगाउनुको वैज्ञानिक कारण के हो ?
हिन्दु धर्ममा विवाहित महिलाले सिउँदोमा लगाइने रातो वा सुन्तला-रातो रङको पदार्थ सिन्दुर हो । हिन्दु समाजमा विवाहमा बेहुलाले बेहुलीको सिउँदोमा सिन्दुर हाल्ने चलन पहिलादेखी चली आएको छ । महिलाले लगाउने यसलाई कतिपयले फेशनभन्दा बढी केही सोच्दैनन् तर यससँग जोडिएको वैज्ञानिक सत्य निकै कम मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ । सदियौंदेखि विवाहिता हिन्दु महिला सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँदैं […]
विवाहिता महिलाले मंगलसुत्र लगाउनाको वैज्ञानिक कारण के हो ?
हिन्दु समाजमा विवाहिता महिलाले मंगलसुत्र लगाउने चलन छ । केही महिलावादी संगठनका महिलाले दासताको प्रतीक भएको भन्दै यो नपहिरने घोषणा गरेका छन् । बिहे गरेपछि पुरुषले कुनै गहना र प्रतीक लगाउनु पर्दैन किन महिलाले मात्र बिहे गरेको चिन्ह यो लगाउनुपर्ने भन्ने तर्क छ । विवाहलाई एउटी स्त्री र एउटा पुरुषले सँगै जीवनयापनका निम्ति आपसी सम्झौता […]
के हो त विज्ञान तथा प्रविधि भनेको ?
पृष्ठभूमि आजको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो । मानिसले परापूर्वकालदेखि विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ । विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकास र समृद्धिको मेरूदण्ड मानिन्छ । यसको विकास बिना कुनै पनि राष्ट्रको प्रगतिलाई तीव्र पार्न सकिँदैन । विज्ञानले प्रविधिको विकासमा मद्दत गर्दछ भने स्तरीय प्रविधिले विज्ञान शिक्षालाई स्तरीय बनाउँछ । भनिन्छ, विज्ञान […]
कुखुरी पहिला कि अण्डा ? यस्तो छ वैज्ञानिकहरुको उत्तर
विश्वमा कुखुरी पहिला कि अण्डा ? विज्ञानले असाधारण कुरालाई सम्भव बनाउँछ । वैज्ञानिकहरुले धेरै यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरुको उत्तर समय-समयमा दिरहेका हुन्छन । विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान हो जसले ब्रह्माण्डका बारेमा परीक्षणयोग्य ब्याख्या र भविष्यवाणीहरूको ज्ञानलाई स्थापित र व्यवस्थित बनाउँछ । कुनै विषय वा वस्तुको प्रयोग र अवलोकनमा आधारित क्रमिक अध्ययन ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ । विज्ञान […]
हाम्रो ब्रह्माण्डमा भएको प्रत्येक वस्तुको शुरु र अन्त्य वा जन्म र मृत्यु आवश्यक हुन्छ । सूर्य लगायत अन्तरिक्षका सम्पूर्ण ताराहरुको पनि जन्म र मृत्यु हुन्छ । ताराको जीवनकालको अन्त्य तीरको अवस्थालाई न्यूट्रोन स्टार भनिन्छ । ताराहरु नियमित रुपमा चम्कनुमा त्यसभित्र इन्धनको रुपमा रहेको हाइड्रोजन परमाणुहरु नाभिकीय प्रक्रियाबाट हिलियस परमाणुमा रुपान्तरण हुँदा निस्कने बिशाल मात्राको ऊर्जाले […]
के हो हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb)?
परिचय हाइड्रोजन बम मानव जातिले अहिलेसम्म निर्माण गरेको सबैभन्दा शक्तिशाली अत्याधुनिक हतियार हो । हाइड्रोजन बमलाई थर्मोन्युक्लियर बम वा एच–बम पनि भनिन्छ । यो आणविक बमभन्दा धेरै गुणा शक्तिशाली हतियार हो । आणविक बम परमाणुको विखण्डनबाट बनेको हुन्छ भने हाइड्रोजन बम संयोजन (फ्युजन) बाट। हाइड्रोजन बममा दोस्रो तहको परमाणु प्रतिक्रिया गराइन्छ, जसका कारण आणविक विस्फोटको शक्तिमा […]
जनैलाई कानमा सिउरिनुको बैज्ञानिक कारण
टुप्पी पाल्नुको बैज्ञानिक कारण
हिन्दूका संस्कार अनुसार शिरको केन्द्रस्थानमा नकाटी-नखौरी राखिने रौंलाई टुप्पी भनिन्छ । वैदिक परम्परा अनुसार कपाल काट्दा वा मुण्डन गर्दा मानिसहरुले टुप्पी राख्ने चलन छ । व्रतबन्ध गरेपछि हरेक बैदिक हिन्दु धर्मालम्बीहरुले टुप्पी राख्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ । पहिला-पहिला भनिन्थ्यो टुप्पी ब्राह्मणको पहिचान हो । प्राय: ब्राह्मण परिवारमा जन्मिएको मानिसको टाउकोमा लामो ‘टुप्पी’ हुने गर्थ्यो । धर्मशास्त्रका […]
के हो बर्मुडा ट्रायगंल भन्ने बारेमा चचा गरौ । आन्ध्र महासागरको पश्चिमी हिस्सामा अवस्थित एक खतरनाक इलाका जसमा पानीको चम्किला धार, प्रकाश र फिज देखिने आन्ध्र महासागरको यही भागलाई बर्मुडा ट्रायगंल भनिन्छ । यस समुन्द्री भागलाई रहस्यमय त्रिकोण, शैतान सागर, आन्ध्र महासागरको नर्क जस्ता नराम्रा नामले यो ठाउँ चिनिएको छ । यो फ्लोरिडाको मियामी, बर्मुडा […]
युरेनियम परमाणु संख्या ९२ भएको एक रासायनिक तत्व हो । युरेनियम प्रकृतिमा पाईने तत्वमध्ये सबैभन्दा बढी २३८ पारमाणविक भार भएको रेडियोधर्मी धातु हो । यो तत्वको खोज जर्मन रसायनविद मार्टिन हेनरिक क्लप्रोथले गरेका थिए । लगातार ऊर्जावान विकिरणहरु फ्याँकिरहने भएकाले यसको आयु सयौँ वर्षसम्म हुन्छ । नेपालमा पेग्माटाइट र ग्रेनाइटजन्य चट्टानमा युरेनियम पाइएको छ । […]
बैज्ञानिक अध्ययन अनुसार मानिसको औसत समय कसरी बित्छ ?
मानिसको औसत समय कसरी बित्छ ? यो बारेमा एक पटक समीक्षा गरौ । मानव विकास सूचकांकको गणना गर्दा मुख्य तीन सूचकहरु औसत आयु, साक्षरता र प्रति व्यक्ति आयलाई समावेश गरिन्छ । स्वास्थ्यको बारेमा सबै किसिमका सूचनाहरु समेट्न कठिन हुने हुदा स्वास्थ्यको सांराशको रुपमा प्रत्याशित आयुलाई समावेश गरिन्छ । आयु प्रत्याशाको उच्चतम र न्यूनतम मान सं.रा.सं.ले […]
को हो त नेपालको पहिलो वैज्ञानिक ?
पृष्ठभूमि सामान्य ज्ञानका धेरै पुस्तकहरुमा नेपालका पहिलो वैज्ञानिक गेहेन्द्र शमशेर राणा हुन् भनेर लेखिएको पाइन्छ । तर स्वर्गीय वैज्ञानिक दयानन्द बज्राचार्यको ‘चेतनाको यात्रा : जीवनमा विज्ञान’ नामक पुस्तकको अनुसार गेहेन्द्र शमशेर वैज्ञानिक नभई प्राविधिक मात्र भएको कुरा उल्लेख छ । वैज्ञानिक र प्राविधिक बीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले विज्ञान रूख हो भने प्रविधि […]
हामीले प्राय: सुन्दै आएको र सकेसम्म हामीले मान्दै आएको एउटा मान्यता के हो भने उत्तरतर्फ शिरानी गरेर सुत्नु हुँदैन । हाम्रो शास्त्रहरुले उत्तर शिरानी गरेर सुत्न वर्जित गरेको छ र लामो समयसम्म उत्तरतर्फ टाउको गरेर सुतेमा स्वास्थमा प्रतिकूल असर पर्ने मात्रै नभई मानसिक सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने बताएको छ । यस कुरालाई कत्तिले मान्छन् त […]
वैज्ञानिक (Scientist) कसलाई भनिन्छ ?
सामान्यतया बिज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा खोज, आविष्कार, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा नयाँ धारणा प्रस्तुत गर्ने ब्यक्तीलाई बैज्ञानिक भनिन्छ । नेपालमा विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका सबै व्यक्तिलाई वैज्ञानिक भन्ने चलन भएतापनि विकसित देशमा प्रकृतिका नियमबारे मौलिक अध्ययन र अनुसन्धान गरी त्यसका रहस्य पत्ता लगाएर नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई वैज्ञानिक (Scientist) भन्ने गरिन्छ । […]